Maurizio Sarri Oo Sharaxay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Kooxdiisa Chelsea Guuldaradii Xalay Uga Soo Gaadhay Man United. - GOOL24.NET
Maurizio Sarri Oo Sharaxay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Kooxdiisa Chelsea Guuldaradii Xalay Uga Soo Gaadhay Man United.
Tababaraha cadaadiska wayn la kulmaya ee Maurizio Sarri ayaa sharaxaad buuxda ka bixiyay sababtii dhabta ahayd ee ay kooxdiisa Blues guuldaradii xalay uga soo gaadhay Manchester United. Chelsea ayaa guuldaro 2-0 ah kala kulantay Man United oo ay Stamford Bridge ku qaabishay.
Maurizio Sarri ayaa daawanayay kooxdiisa Chelsea oo awoodi kari wayday in ay hal gool ka dhaliyaan goolhayaha dookha labaad ee Sergio Romero wuxuuna Sarri cadeeyay in ay xalay kooxdiisu qaybtii hore ahayd mid nasiib xun balse ay qaybtii labaad ahaayeen kuwo ciyaaray kubbada cagta oo qasan.
Maurizio Sarri oo ka hadlaya kulankii FA Cupka ee Man United ayaa yidhi: “Caawa (xalay) bilaa nasiib ayaanu ahayn, sababtoo ah waxaanu ciyaarnay qaybtii hore oo aad u fiicnayd, dhamaadkii qaybtii hore natiijadu waxay ahayd 2-0. Dhawr fursadood ayaanu iyaga siinay, qaybtii labaad wwaxaanu ciyaarnay kubbad jaho wareer ah”.
Maurizio Sarri oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Kadib qaybtii hore wax sahlan may ahayn in la ciyaaraa iyada oo natiijadu sidaas ahayd. Qaybtii hore oo aad u fiican ayaanu ciyaarnay. Dabcan waxaan dareemayaa cadaadiska natiijada, ee ma aha wax kale”.
“Waxaa waajib nagu ah in aanu shaqayno, waxaa qasab nagu ah in anu wada hadalno, waxaa waajib nagu ah in aanu weerar badan helno iyo ka go’anaanshaha xerada ganaaxa. Fursad wayn ayay anaga noo ahayd in aanu taageerayaasha la sii joogno, laakiin hadda xaaladu way adag tahay. Maalin adag ayay anaga noo tahay” ayuu Sarri hadalkiisa sii raaciyay.
Sarri oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Qaybtii labaad way nagu adkayd. Hadda waxa ugu muhiimsani waa in aanu deganaano oo aanu isku diyaarino finalka axada iyo Europa League. Waxaa waajib nagu ah in aanu naftayada aamino, waxaanu kooxdan ku haysanaa ciyaartoy fiican”.
Chelsea ayaa finalka EFL Cupka la ciyaari doonta kooxdii ay ceebta kala soo kulantay ee Manchester Ciy halka kulanka lugta labaad ee UEFA Europa League ay Stamford Bridge ku soo dhawayn doonaan kooxda Malmo oo ay kulankii lugtii hore guul ka soo gaadheen.